अष्टलक्ष्मीले औंल्याइन् एमाले बिग्रिनुको ५ कारण
नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेकपा एमाले कमजोर हुनु र बिग्रिनुको मुख्य चार कारण औंल्याएकी छन् ।
एमालेको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उनले विचारबाट विचलित भएको, गुटबन्दी गरेको, जनमतको कदर नगरेको, पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्तामा रूपान्तरण नआएको तथा गालीगलौजको संस्कार अपनाएकाले एमाले कमजोर र विभक्त भएको बताएकी हुन् ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि व्यवस्थित र विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम कहिल्यै आयोजना नभएको र त्यसले नेता तथा कार्यकर्तालाई विचारविहीन बनाउन सहयोग गरेको उनले उल्लेख गरिन् ।
‘हामी विचारबाट विचलित भयौं । व्यवस्थित खालको प्रशिक्षण नवौं महाधिवेशनपछि गर्नै सकेनौं । यसैले एमालेलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो ।’
पार्टीभित्र भएको गुटबन्दीका कारण पनि एमाले कमजोर भएको विश्लेषण शाक्यको छ । ‘नवौं महाधिवेशनबाटै गुटबन्दी शुरू भएको थियो । प्रशिक्षण नभएपछि विचार भएन । विचार नभएपछि गुट जन्मिदोरहेछ । एमालेमा प्यानल बनाएर चुनाव नगरौं । क्षमता, योग्यता, कामको मूल्यांकन गरेर नेतृत्व चयन गर्ने परिस्थिति बनाउनेतर्फ लागौं’, शाक्यले भनिन् ।
एमाले कमजोर हुनुको अर्को कारण जनमतको कदर गर्न नसक्नु रहेको उनले बताइन् । ‘जनताले हामीलाई दुईतिहाइ नजिकको मत दिए । जनताले माया गरे । सरकारमा पुर्‍याए । तर जनमतको कदर गर्नै सकेनौं । जनताको भावनाको सम्मान गर्न सकेनौं । जनतालाई जे पर्छ, परोस् भन्ने सोच्यौं । अब स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्यो, त्यतिबेला जनतालाई के भन्छौं ?’, शाक्यले प्रश्न गरिन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले गालीगलौजको संस्कार अपनाएकाले पनि एमाले कमजोर भएको उनले उल्लेख गरिन् । ‘हामी गालीगलौजको राजनीतिमा गर्छौं र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गर्छौं । यसले हामीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ’, शाक्यले भनिन् ।
एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता रूपान्तरण हुन नसक्दा एमाले कमजोर हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ । ‘रुपान्तरित हुने कि नहुने ? तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म रुपान्तरित हुने कि नहुने ? त्यही सामन्ती सोच र धङधङी बोकेर हिँड्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी लिएर हिँड्न सक्दैनौं’, उनले भनिन् ।
एमालेलाई वैचारिक ढंगले सुदृढ बनाएर अघि बढ्नका लागि विगतलाई निर्मम समीक्षा गर्ने आँट नेतृत्वले गर्नुपर्ने उनले बताइन ।
पार्टीलाई सुधार्नका लागि एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ अक्षरश पालना हुनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा जेठ २ मा फर्काउनुपर्छ । त्यसेबला फर्कँदा जसको नेतृत्व हुन्छ, उसलाई कायम गरौं । कम्प्युनिस्टहरूको हृदय फराकिलो हुन्छ । भनिन्छ, नेतृत्वले फराकिलो हृदय बनाएर पार्टीलाई सुदृढ बनाउन लाग्नुपर्छ’, शाक्यले भनिन् ।
नेकपाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएपछि एमालेभित्र रहन नपाएको भन्दै उनले गुनासो पोखिन् । ‘आफैँले बनाएको घरभित्र प्रवेश पाइएन । लामो समय बाहिर बस्नुपर्‍यो । नेकपा एमाले हुन सकेनौं । पार्टीबाहिर बस्नुपर्‍यो । बल्ल अहिले एमालेभित्र रहन पाएका छौं’, उनले भनिन् ।
शाक्यले माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेर राम्रो नगरेको पनि बताइन् । ‘माधव नेपालले लिएको बाटो सही छैन । यतिबेला फूटको होइन एकजुट राजनीतिको आवश्यकता छ । माधव नेपाल हाम्रो अग्रज हो । नेता हो । आफ्नो जीवन दिएको पार्टीलाई चटक्क छाडेर नयाँ आन्दोलन सिर्जना गर्छु भन्ने कुरा ठीक हुन सक्दैन’, उनले भनिन् ।